Soo koobitaan fudud oo ku saabsan liisamada Creative Commons | Abuurista khadka tooska ah
Soo koobid fudud oo ku saabsan shatiyadaha Creative Commons
Judit Murcia | | General, dhowr
In kasta oo ay jiraan dhawr Shuruucda ilaaliya xuquuqda lahaanshaha shaqooyinka, Way adag tahay in la xakameeyo iyo in ka badan haddii aan tixraacno shabakadda. Qorayaal badan ayaa u oggolaada isticmaaleyaasha kale inay ku isticmaalaan shaqadooda xaaladaha qaarkood. Shuruudahaan waxaa dejiya Shatiyada Creative Commons. Waxay noo oggolaadaan oo ay noo dammaanad qaadaan xuquuqda nuxurka.
Waxaa jira wadar ah lix nooc oo kala duwan oo ah rukhsadaha Creative Commons. Haddii aad xiiseyneyso inaad waxbadan ka ogaato mowduuca, ha joojin akhriska maxaa yeelay waxaan ku siin doonaa soo koobid fudud oo ku saabsan mowduuca. Waad ka faa'iideysan kartaa haddii aad tahay qoraa doonaya inuu la wadaago shaqooyinkooda, ama dhinaca kale, waxaad tahay isticmaale doonaya inuu adeegsado waxyaabo ka yimid mid kale isagoo ixtiraamaya shuruudaha.
1 Waa maxay Creative Commons?
2 "Lakabyada" ruqsadaha Creative Commons
3 Nooca shatiyada
4 Ruqsado badan, kuwa ugu xaddidan
Waa maxay Creative Commons?
Sidaan horeyba ugu sheegnay qoraal hore, Creative Commons wuxuu ku saabsan yahay a urur aan macaash doon ahayn. Waxay ku taal California, Mareykanka. U heellan tahay u dammaanad qaada qorayaasha qaybo kala duwan xadka ka faa'iidaysiga shaqooyinkooda ama curinta internetka. Dhinaca kale, waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay si sharci ah u isticmaalaan mashaariicda ama shaqooyinka kuwa kale, illaa iyo inta shatiyada la ixtiraamo.
Way kala duwan yihiin noocyada shatiyada Hal Abuur. Ku astaamo muuqaal oo kala duwan ayaa lala xiriiriyaa mid kasta oo rukhsadaha ah iyo, sidaa darteed, rukhsadaha kala duwan ee mid kasta oo ka mid ahi oggolaado. Waxaan hoos ku arki doonaa iyaga si aan u ogaanno waxay na siinayaan.
"Lakabyada" ruqsadaha Creative Commons
Sida ay ugu yeeraan, ruqsadaha ayaa ka kooban saddex "lakab". Ugu horreyntii, waxaan helnaa lakabka koowaad ee aan ka heli doonno rukhsad kasta: Xeerka Legal. Maadaama dhammaan isticmaaleyaashu aysan aqoon u lahayn sharciga, lakabka labaad “Deed Common” ama “aadanaha akhrisan karo".
La Lakabka ugu dambeeya ee shatiga waa midka ay aqoonsantahay softiweerku. Waxaa loo adeegsadaa si loogu fududeeyo Websaydhka si loo ogaado shaqooyinka ku hoos jira rukhsadaha Creative Commons. Tarjumaadda kiiskan waxay noqon laheyd "Mashiinka la akhrin karo".
Ruqsadahaani waxay leeyihiin halbeegyo kala duwan oo la isku dari karo. Waxaan hoos ku aragnaa:
Astaan ​​(BY): Ruqsadani waxay u oggolaaneysaa kuwa kale inay adeegsadaan shaqada illaa iyo inta la aqoonsan yahay qoraaga abuurka asalka ah. Waa la qaybin karaa, la qasi karaa, loona adeegsan karaa ujeedooyin ganacsi ujeeddooyin kale. Marka la soo koobo, shaqada waa la isticmaali karaa, laakiin wuxuu soo xiganayaa qoraaga.
Isla wadaag (BY-SA): Si loo isticmaalo shaqooyinka ku hoos jira liisankaan waa lagama maarmaan in la soo xigto qoraaga waxayna shati u siinayaan shaqadooda cusub isla shuruudaha, waa inay ahaadaan kuwo isku mid ah.
Iyadoo aan la helin wax shaqo ah (BY-ND): Xaaladdan oo kale, shaqada waa loo isticmaali karaa, taas oo ah, dib-u-qaybinteeda, ganacsi ama maahan, illaa iyo inta aan wax laga beddelin oo lagu wada gudbiyo dhammaanteed. Dabcan, qirashada qoraaga.
Aan-ganacsi ahayn (BY-NC): Waxay kuu ogolaaneysaa inaad wax ka beddesho shaqada oo aad ka dhisto mid kale asalka laakiin illaa iyo inta ujeedkiisu uusan ahayn ganacsi.
Afartan kor ku xusan ayaa ah kuwa ugu waaweyn, laakiin waxaa jira laba kale oo isku qasba shuruudaha, kuwaas oo ah kuwa aan hoos ku sharxi doonno.
Ruqsado badan, kuwa ugu xaddidan
Marka xigta, waxaan soo qaadan doonnaa labada liisanka hadhay, kuwani waxay isku darayaan shuruudaha aan kor ku soo xusnay. Aan baranno iyaga:
Aan-ganacsi ahayn - Ma jiraan wax shaqo ah oo wax soo saar leh (BY-NC-ND): Waa liisanka ugu xaddidan dhammaan. Waxay kaliya noo ogolaaneysaa inaan soo dejino shaqada oo aan wadaagno inta qoraaga la qiranayo oo aan wax laga badalin. Sidoo kale, ma noqon karto ujeeddooyin ganacsi.
Aan-ganacsi ahayn - Ma jiraan wax shaqo ah oo wax soo saar leh (BY-NC-SA): Liisankaan wuxuu noo ogolaanayaa inaan isku qasno, isku hagaajino oo aan ka abuurno shaqadii asalka ahayd illaa iyo inta aysan ujeeddooyin ganacsi aheyn. Sidoo kale waa inaad qiraysaa qoraaga isla markaana aad isla liisankaas u nisbeysaa shaqada cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Soo koobid fudud oo ku saabsan shatiyadaha Creative Commons
Sawirqaadaha Isbaanishku wuxuu dib u soo ceshadaa boqoradii caanka ahaa ee Roomaanka ee farshaxannimada dhabta ah
Dhamaan sawirada cajiibka ah ee Game of Thrones ee loogu talagalay xilli ciyaareedka sideedaad iyo kan ugu dambeeya